रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न पायो अनुमति
साउन १६, काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ आउने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट साउन १६ गते स्वीकृती पाएसँगै सर्वसाधारणका लागि उक्त कम्पनीको आईपीओ विक्रीमा आउने भएको हो ।
उक्त कम्पनीले अब ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले निष्कासन गर्ने आइपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ४ रेटिङले कम्पनीको आधारभुत पक्ष औषत भन्दा तल रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ६ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा १२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
सो अवधिमा कम्पनीले रू. २ करोड ७० लाख नाफा कमाएको थियो । चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४७ करोड रहेको उक्त कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. १४ करोड ९६ लाख सञ्चित गरेको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ८२ करोड २३ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले १६ जनालाई रू. १ करोड ६७ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने एक जनालाई रू. १० लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा रू. ८६ करोड ९८ लाख जम्मा भएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा लेखको धितोमा राखेर रू. ९ करोड ७१ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
[Jul 31, 2020 09:06am]
Rating4matra kina auchha IPO ma ?
[Jul 31, 2020 08:23am]
Market ma 140 ma bikeko bela paliyo k garnu ta